Khuphela i-WhatsApp Plus simahla, yongeza amanqaku! | I-Androidsis
I-whatsapp kunye Uhlengahlengiso lwesicelo seWhatsApp esiqhelekileyo esiza kusivumela ukuba sizenzele kwaye unemisebenzi eyongezelelweyo eyongezelelweyo Kwisicelo sethu kuWhatsApp, yeyona ndlela ilula yokufumana okona kulolona klayenti lomyalezo luthandwayo emhlabeni. Singayiqonda i-WhatsApp Plus njenge "mod", oko kukuthi, isicelo esiguquliweyo ukusivumela ukuba sibe neminye imisebenzi emininzi kunye nokwenza ngokwezifiso, ezenziwa ziingcali zekhompyuter ezifuna ukwenza uninzi lwezicelo ezingenamda. .
Okwangoku, i-WhatsApp Plus ifumaneka ngokupheleleyo ngaphandle koxinzelelo olwenziwe ngabenzi beWhatsApp ukuzama ukususa le "mod" kuzo zonke iiseva zokukhuphela. Enkosi kule Inguqulelo eguqulweyo yeWhatsapp Sinokwenza ngokwezifiso indlela abanye abasibona sidibene ngayo, sineengxoxo ezininzi ezivulekileyo ngaxeshanye, kwaye sitshintshe apho i icon nganye ivela ngaphakathi kwesicelo.
1 Uyikhuphelela njani kuWhatsApp Plus simahla
2 Uyifaka njani i-WhatsApp Plus ReBorn
3 Uyikhuphele phi ingxelo yokugqibela yeWhatsApp Plus
4 I-WhatsApp Plus Holo kunye ne-WhatsApp Plus Jimods
Uyikhuphelela njani kuWhatsApp Plus simahla
Ukufaka i-WhatsApp Plus kulula kwaye kufikeleleke kuye wonke umntu. Okokuqala siza kuchaza ukuba i-WhatsApp Plus iyafumaneka kwizixhobo ze-Android, kwizixhobo ze-iPhone kufuneka ukuba kwenziwe iJailbreak kwaye iinguqulelo zikaWhatsApp Plus zingazinzanga, ezinokuthi zikhokelele ekuvinjweni kweakhawunti, ke thina uza kukufundisa faka i-WhatsApp Plus ye-Android.
Ngaphambi khuphela i-WhatsApp Plus simahla kwaye uyifake, okokuqala siza kwenza ukhuphelo lwazo zonke izingxoxo zikaWhatsApp, kuba oku siya ku: Useto lweWhatsApp> Useto lweNcoko> Gcina Incoko. Nje ukuba sigcinwe, siyaqhubeka ukukhipha usetyenziso.
Sikhuphele .APK yeWhatsApp Plus ngeSpanish ukusuka elandelayo LINK.
Uyifaka njani i-WhatsApp Plus ReBorn
Xa sele ukhutshiwe, siya kwicandelo lokukhuphela kwisixhobo sethu se-Android kwaye siqhubekele kufakelo. Xa ifakiwe kufuneka siqhubeke nokufaka inombolo yethu yefowuni, silandela inkqubo efanayo ngalo lonke ixesha sifaka uhlobo lwakudala lweWhatsApp.
Kuya kufuneka silinde imizuzu embalwa yogcino lweencoko esele sizenzile kamva kwelinye lamanyathelo okuqala ukubuyiselwa. Siza kuyibona ngokuzenzekelayo imisebenzi emitsha phezulu ekunene, kwi icon entsha yeWhatsApp Isimboli "+" embindini.
Uyikhuphele phi ingxelo yokugqibela yeWhatsApp Plus
I-WhatsApp Plus ReBorn iya kujonga uhlaziyo kunye nohlaziyo ngokuzenzekelayo, kodwa ukuba ufuna ukukhuphela ingxelo yayo yamva nje, ungaya kwiwebhusayithi esemthethweni kule LINK ukuya khuphela i-WhatsApp Plus kwaye uyikhuphele ngokuthe ngqo ukuyifaka kwakhona ngala manyathelo angentla.
I-WhatsApp Plus Holo kunye ne-WhatsApp Plus Jimods
Ngo-2014 Ukulungiswa kweHolo kuWhatsApp Plus, luguqulelo lweWhatsApp Plus ekuvumela ukuba ufake isikhombimsebenzisi se-Holo ye-Android, nangona kunjalo, le nguqulo iyekisiwe phakathi ku-2015 ngenxa yokuba uninzi lwezixhobo ze-Android sele lusebenzisile olu manyano.
Nangona kunjalo, sikwafumana ingxelo ethandwayo I-WhatsApp Plus Jimods, inguqulelo elungiselelwe kwaye oko kukuvumela ukuba ufihle inqanaba kuWhatsApp ngokupheleleyo, ukukhuphela kulula kakhulu. Ukuyifaka kufuneka ukhiphe nayiphi na ingxelo esemthethweni okanye eguqulweyo yeWhatsApp kwisixhobo kwaye uqhubeke nokufaka le apk ngqo kwimemori yesixhobo sakho, ukuze ukwazi ukuyisebenzisa faka i-whatsapp kwithebhulethi.